Global Voices teny Malagasy » Mampiely Ny Fahendrena Nentim-paharazana Amin’ny Alalan’ny Sary sy Soratra (Memes) Amin’ny Teny Hawai’i · Global Voices teny Malagasy » Print
Mampiely Ny Fahendrena Nentim-paharazana Amin'ny Alalan'ny Sary sy Soratra (Memes) Amin'ny Teny Hawai'i
Voadika ny 08 Marsa 2018 4:56 GMT 1	 · Mpanoratra Gwenaelle Lefeuvre Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sary sy soratra amin'ny fiteny Hawai'i, noforonin'i aloha_aina  tao amin'ny Twitter. Dikanteny: “Tsy ampianarina any amin'ny sekoly iray ny fahalalana rehetra.”
Amin'ny maha-mpiaro mafana fo ny fiteniny, nandray anjara tamin'ny fanamby 2018 #MemeML  i Hawaiian, na koa, ‘Ōlelo Hawai‘i , @aloha_aina . Namoaka sary-sy-soratra maromaro niaraka tamin'ny fahendrena Hawaiian antsoina hoe ‘łlelo no'aeau,’ ohabolana tononkalo’ izy, ka nangonin'ilay mpampianatra ambony malaza Hawaiiana, Mary Kawena Pukui ny ankamaroan'izany. Mizara bebe kokoa momba ny fiteniny sy ny fandraisany anjara amin'ny fanamby miaraka amin'ny Rising Voices izy.
Rising Voices (RV): Afaka lazainao fohifohy aminay ve ny momba ny fiteninao?
Raha iray amin'ireo fiteny ofisialy roa ao Hawai'i ny ‘Ōlelo Hawai'i – dia mbola fiteny eo ambany fahirano.
Taorian'ny fanonganana ny fanjakana Hawaiina tamin'ny taona 1893, niezaka nanafoana ny “Ōlelo Hawai'i tamin'ny alalan'ny fandraràna ny “fanabeazana amin'ny fiteny Hawaiiana” ny governemanta Amerikana vaovao. “Nanjary “Anglisy Mahazatra “ny fianarana, ka na tamin'ny vanim-potoanan'ny ray aman-drenibe aza, dia nokapohina ny ankizy rehefa miteny Hawaiiana. Raha ny marina, tsy nampianarina ny ‘ōlelo (miteny Hawaiiana) ny olona tamin'ny fotoanan'ny ray aman-dreniko. Noho izany, taorian'ny efa ho 100 taona, toa nahomby ny fikasana hamonoana ny fiteny Hawaiian.
Na izany aza, rehefa nitombo ny hetsika ho an'ny zo sivily tao amin'ny tanibe, maro ireo Hawaiana nandray izany mba hiady ho an'ny zony, ny kolontsainy sy ny fiteniny. Miaraka amin'ny fifohazan'ny vahoaka ho an'ny hetsika ara-kolontsaina tahaka ny mele (tononkalo sy hira), hula (dihy) sy lua (haiady Hawaiiana) – izay mbola velona tsara tany ambadika tsy fantatra ny maro amin'izy ireo – nanomboka nahazo vahana ny Ōlelo Hawai'i.
Maro ireo tompon-dakan'ny ‘Ōlelo Hawai'i tonga mba hampianatra ampahibemaso. Satria ny Hawaiian dia tenim-pirenena kaona (dikanteny miafina sy tononkalo), hita fa nanampy tsy tamin'ny famerenana ny fiteny ihany ny ny mānaleo (teratany mpiteny ny Hawaiian) fa koa ny hevitra ao ambadiky ny teny.
Tamin'ny taona 1978, nahitsy ny lalàm-panorenana mba hametraka ny “Ōlelo Hawai'i ” ho iray amin'ny fiteny ofisialy roa ao amin'ny fanjakana miaraka amin'ny teny Anglisy. Na izany aza, tsy nesorina ny lalàna mandràra ny fampianarana amin'ny teny Hawaiian raha tsy tamin'ny taona 1986.
RV: Manao ahoana ny toeran'ny fiteninareo ao amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto?
Na dia nisy dingana lehibe natao mba hamelomana indray ny ‘Ōlelo Hawai'i aza, dia mbola betsaka ny zavatra tokony hataonay. Vao tamin'ny volana lasa teo, nisy mpitsara naneso lehilahy iray noho ny firesahany tamin'ny teny Hawaiiana tao amin'ny fitsarana. Manana olana momba ny taranaka mpiteny izay miteny amin'ny fantatra amin'ny anarana hoe “Oniversite Hawaiian” ihany koa izahay – indrindra ny teny Anglisy adika amin'ny teny Hawaiiana, izay tsy ahitana famantarana ara-kolontsaina Hawaiiana.
Soa ihany fa mbola misy ny kūpuna (zokiolona) sy ny kumu (loharano na mpampianatra) izay mitohy mitarika anay sy manohana ny teninay sy ny kolontsainay. Nanampy tamin'ny famoronana loharanom-baovao lehibe an-tserasera toy ny ulukau.org  (tahirin-kevitra momba ny Hawaiian) sy ny wehewehe.org  (angona rakibolana Hawaiian – Anglisy) izy ireo.
RV: Inona no antony nandraisanao anjara tamin'ny fanamby, ary inona no aingam-panahinao tamin'ireo sary sy soratra an-tononkalo ireo?
Tiako ianao mankalaza ny tenindrazana sy manome sehatra ho an'ny olona mba haneho hevitra amin'ny tenindrazan'izy ireo. Mahafinaritra ny mahita ny kolontsain'ny olo-kafa amin'ny alalan'ny fitenin'izy ireo. Ary, mampientanentana ny mieritreritra ny fomba nahafahan'ny sehatra antserasera tahaka ny Rising Voices manampy amin'ny fampaharetana ireo kolontsaina ireo .
Raha ny lohahevitry ny sary sy soratra nalefako, niezaka ny nānā i ke kumu aho (jereo ny loharano) ary mizara zavatra hafa ankoatra izay afaka hitako manokana. Maro amin'ireo andian-teny ireo no malaza ‘ōlelo no'eau (fomba fiteny poetika).
RV: Iza no tianao hanaovana fanamby mba hamorona sary sy soratra amin'ny fitenin'izy ireo?
Te handrisika ny rehetra izay miteny ny tenidrazana aho mba handefa ny tenindrazanao manokana sy hampaharitra izany fiteny izany ao amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto. Ho an'ny vondrom-piarahamoniko Hawaiian: E ala e. E ho‘omau kākou. Mitsangana. Ary, mahareta.
Jereo ireo sary sy soratra maro tamin'ny Fanamby Sary sy Soratra amin'ny Tenindrazana, izay amin'ny fiteny isan-karazany manerantany amin'ny alalan'ny tenirohy #MemeML ao amin'ny Instagram , Twitter , na Facebook . Misy ihany koa ny vondrona Facebook ho an'ny Fanamby izay ahitana ny fandraisana anjaran'izao tontolo izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/08/115985/
 2018 #MemeML: https://rising.globalvoices.org/blog/2018/02/06/promoting-a-more-linguistically-diverse-internet-through-the-mother-language-meme-challenge-2018/
 Mary Kawena Pukui : https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Kawena_Pukui
 vondrona Facebook : https://www.facebook.com/groups/mememl